Roob Duufaan Watay Oo Ka Da'ay Degmada Salaxley Ee Duleedka Koonfureed Ee Hargeysa Iyo Khasaaraha Uu Sababay | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Aabbaha Dhalay Wiil ku Dhintay Roobka Duufaanka Watay Oo ka hadlay khasaaraha
Sallaxley(ANN):- Ugu yaraan hal Qof, ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen, Roob Duufaan watay oo xalay fiidkii ka da’ay Degmada Sallaxlay iyo Tuulooyin hoos yimaadda, waxaana ku dumay Guryo Boqol gaadhaya, sida ay Warbaahinta Aftahannews.com u xaqiijisay Xildhibaan Kawsar Aw Cali oo ka tirsan Mudanayaasha Golaha deegaanka ee degmada Sallaxlay.
Haddaba, Aadan Siciid oo ah Aabbaha dhalay Wiilka yar ku geeriyooday Roobka Duufaanta watay ee fiidkii xalay ka da’ay degmada Sallaxlay oo u Warramay Aftahannews.com, ayaa sheegay in Wiilkiisa oo laba sano iyo badh jiray uu geeriyooday markii uu ku dumay Guri Bas ah oo Qoyskiisu degganaa.
Waxa uu Aadan Siciid oo Khadka Taleefanka ugu warramay Tifaftiraha Aftahannews.com Cabdifataax Ismaaciil Mursal, isagoo u Sheegay, in laba Carruur ah oo uu dhalay iyo Hooyadood oo Xaaskiisa ahi ka badbaadeen Guriga ku dumay Wiilkooda oo lagu magacaabi Jiray Cabdisamad Aadan Siciid.
“Walaal Amarka Illaahay cidi ma baajin karto, waxan dhacayna waa qaddar Eebbe, waxaannu degganayn Guri Bas ah oo gudaha magaalada Sallaxlay ku yaal, Carruurta oo saddex ah iyo Hooyadood Guriga ayey ku jireen markii Roobka Duufaanta wataa bilaabmay Lixdii fiidnimo ee xalay.” Sidaa ayuu yidhi Aadan Siciid.
Aadan oo ka warramaya sida Wiilkiisa Gurigu ugu dumay iyo sida Illaahay u badbaadiyey labada Ubad ah ee kale iyo Hooyadood, waxa uu yidhi; “Markaa, markay Xaasku aragtay in Gurigu soo dumayo oo Dhibica Dabaysha badan wataa xoog u ruxayo, ayey Carruurta dibedda ugala carartay, markaa wuu ka muruxsaday Wiilkan dhintay, ka dibna intay dib ugu laabanaysay ayuu Gurigu ku dumay, Illaahay mahaddii labadii Carruur ahaa Xaasku la carartay iyo Xaaskuna way ka badbaadeen.”
Mar aan Aadan Siciid weydiiyey inay aaseen Meydka Wiilkiisa dhintay iyo Halka ay Carruurtii kale joogto waqtigan, waxa uu ku jawaabay; “Walaal Carruurta iyo Xaasku waxay joogaan hadda Xaafad kale oo magaalada ka mid ah, Meydka Wiilkana weli maannu aasin oo Dhulku waa Dhiidhi iyo Biyo, waana habeen, markaa Berri haddii Illaahay idmo ayaannu qorshaynay inaannu aasno.”
Dhinaca kale, inkasta oo aan weli Tirakoobka rasmiga ah Khasaaraha Roobka Duufaanta watay ee fiidkii xalay ka da’ay degmada Sallaxlay iyo deegaannada Hoos-taga la soo saarin, haddana waxa la xaqiijiyey waa dhimashada Wiilkaas yar iyo illaa saddex Qof oo ku dhaawacmay. Hase-yeeshee, Guryo Tiro badan oo ugu yaraan Boqol iyo wax la mid ah lagu qiyaasay, ayaa Dumaray, halka qaarkood ay Jiingadda Duufaantu kala tagtay. Guryaha ayaa isugu jira Daaro, Dergado, Basas iyo Aqal-Soomaaliyo, sida ay Xildhibaan Kawsar Aw Cali iyo Dad kale oo ku sugan Sallaxley u xaqiijiyeen Aftahannews.com.
“Dhimashadu waa Wiil yar aan kuu xaqiijin karaa, dhawr Qofna waa dhaawac, Guryo badan oo Boqol gaadhaya haddaanay ka badnayn, ayuu Roobka Duufaanta watay dumiyey, kuwaas oo isugu jira Kuwo Daaro ah, Dergado iyo Aqal-Soomaaliyo, Qaar badanna Jiingadda ayuu kala tegay, Guryaha Roobkaasi dumiyey waxaa ka mid ah Gurigaygii oo hadda Bakhaar ahaa, Gurigii Guddoomiyaha degmada Sallaxlay iyo Cusbitaalkii Sallaxlay oo uu isna Jiingadda kala tegay..” Sidaa waxa tidhi Xildhibaan Kawsar Aw Cali oo ka mid ah Xidhibaannada golaha deegaanka degmada Sallaxlay mar ay Caawa Cabdifataax Ismaaciil Mursal Khadka Taleefanka ugu warrantay.
17-ka Bishii May ee sannadkan, ayey ahayd markii Roobabka Duufaanta la magac-baxday Sakar ay ka bilaabmeen deegaannada Xeebaha Somaliland, kuwaas oo sababay dhimashada ku dhawaad Lixdan Ruux, Dhaawaca labaataneeyo Qof, Kumannaan Xoolo ah, Guryo Badan iyo Boqollaal Beerood oo Roobabka Duufaanta watay la tageen